Tag: zvemukati manejimendi sisitimu | Martech Zone
Tag: zvemukati manejimendi system
Makore mashoma apfuura, 100% yevatengi vedu vakashandisa WordPress senge yavo yemukati manejimendi system. Makore maviri chete gare gare uye iyo nhamba yadonha neinenge chetatu. Sezvo ini ndanga ndichigadzira nekugadzira saiti muWordPress kwemakumi gumi ikozvino, ini ndinowanzo tarisa kune iyo CMS nekuda kwezvikonzero zvishoma. Nei Tichishandisa WordPress Inoshamisa theme theme uye kutsigira. Saiti senge themeforest ndidzo dzinodiwa kwandiri kwandinogona kuwana zvakanyanya
Mugovera, June 3, 2017 Mugovera, June 10, 2017 John Blue
Nei Vashambadziri Vachida CMS muTekitchen Ravo gore rino
Chipiri, Kurume 14, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Stephen Morgan
Vazhinji vatengesi munyika yose vari kurerutsa iyo yechokwadi kubatsirwa iyo yeChinyorwa Chekushambadzira System (CMS) inogona kuvapa. Aya mapuratifomu akaisvonaka anopa hupfumi hwehuwandu hwakawanda husingawanikwe hwakareba kupfuura kungovabvumidza ivo kungogadzira, kugovera uye kuongorora zviri mukati mebhizinesi. Chii chinonzi CMS? Iyo yemukati manejimendi system (CMS) ndeye software chikuva iyo inotsigira iyo kugadzirwa uye kuchinjiswa kweadhijitari zvemukati. Zvemukati manejimendi masisitimu anotsigira kupatsanurwa kwemukati uye mharidzo. Zvimiro
Zvinotemesa musoro: Tumira KunongedzeraInzvimbo Yakanaka, Nesimba Yakagadziriswa Resume Saiti
Chitatu, July 16, 2014 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Pane kazhinji nguva apo iwe haufanire kushandisa zviuru zvemadhora pane saiti nyowani - iwe unongoda chigadziriso chechiitiko chepamhepo portfolio, iri nyore chigadzirwa peji kana kungo ratidza yako online kutangazve. Zvinotyisa zvinopa mhinduro yakamisikidzwa uko iwe kwaunogona kuvaka kunze nhare nhatu, dzakanakisa saiti pasi pe $ 3 pagore. Zvinotyisa ndeye online sevhisi inoita kuti zvive nyore kwazvo kwauri kuti iwe ugadzire yakanaka, nhare